पासभएका गाडीलाई समेत उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ – Everest Pati
पासभएका गाडीलाई समेत उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’
काठमाडौँ। सवारी पास बनाइहालेँ, अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनुभएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु-याउनुहोला ?दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जोडिएका सवारीबाहेक अब उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ गरिएको छ ।
आकाशमा अज्ञात प्रकाश देखिएपछि अमेरिकावासी त्रसित (भिडियोसहित)
अस्पतालमा घन्किएको गीतमा नाच्छन् बुटवलका कोरोना संक्रमित ! [भिडियोसहित]